Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Welsh Joe Rodon Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Joe Rodon na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Mbido ya, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, arsgbọala, Ndụ na Ndụ Onwe
Na nkenke, nke a bụ ihe ngosi nke njem ya site na mmalite ụbọchị, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke ihe ncheta anyị, lee nke a post-cradle to famous gallery - nchịkọta ihe osise nke Joe Rodon's Bio.
Ndụ nke Joe Rodon.
Ee, gị na gị ma na o nwere gosipụtara na ọ bara uru na Jose Mourinho ekele maka scintillating Spurs mpụta mbụ. N'agbanyeghị nkwado ahụ, anyị achọpụtala na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara akụkọ ndụ Joe Rodon. Anyị akwadebewo ya ma na-ekere òkè. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Akụkọ nke Joe Rodon:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha Roblock. Joseph Peter Rodon mụrụ na 22nd ụbọchị nke ọnwa 1997 na nne ya, Tania Rodon na nna, Keri Rodonat na obodo Llangyfelach, na Swansea, Wales. Ndị Welsh na-agba ọsọ bụ nwa nke abụọ nke ụmụ abụọ amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya nke yiri 50s.
Zute nne na nna Joe Rodon, Tania na Keri.
Joe Rodon afọ eto:
Onye na-agbachitere ahụ tolitere n'obodo ya na nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Sam. Llangyfelach bụ ebe nchekwa nke ihe ọ filledụ jupụtara na nwata - n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke etolite, gụnyere ịnụ ụtọ bọọlụ. Lee, anya ikuku nke ebe o toro.
Igwe ikuku nke obodo ebe Joe Rodon toro.
Ezigbo Ezinụlọ Joe Rodon:
Amụrụ n'ime ezinụlọ nwere akụkọ egwuregwu bara ụba, ọ na-esiri ya ike ịghara ịghọ egwuregwu. Nwa amaala Llangyfelach achọghị ihe ọ bụla ọzọ karịa football, na ndị ezinụlọ ya nọ na klas nwere obi ụtọ karịa ịhụ ka ọ na-aga nke ọma na ya.
Ezinụlọ ezinụlọ Joe Rodon:
Dị ka Gareth Bale, Roblock nwere mgbọrọgwụ nke ezinụlọ ya miri emi na Wales. Obi abụọ adịghị ya na ọ ga-anọchite anya mba Celtic na bọọlụ mba ụwa. Wales niile ka ọ nwetara, n'ihi ya, ọ nwere mmasị kachasị mma nke ndị Welsh.
Joe Rodon Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Eziokwu:
Onye na-azụ azụ were nzọụkwụ mbụ ya na bọọlụ asọmpi na Llangyfelach dị na mpaghara. Ọ bụ nnọọ n'ime egwuregwu na nwere Swansea City oge tiketi na-eto eto.
You hụla ihu onye agbachitere nwata a?
“Amalitere m igwu egwu maka LLANGYFELACH MGBE M DI NA NTA. Nwanne m nwoke nke nwanne m nwoke bụ Sam sokwa na ndị nkuzi wee bụrụ nnukwu ịnyịnya na ahụmahụ kemgbe, "
Mgbe Sam sonyeere Swansea, onye ọ bụla nwere ike ịkọ na nwanne ya nwoke nke tọrọ ga-agbaso. Rodon batara mgbe ọ dị afọ 8 wee chọta nzube na bọl. Dị ka ya:
“NA GBANYE N’ THELỌ NWOKE nke SWANSEA, Achọrọ m ka m bụrụ onye na-agba bọọlụ ike. Achọrọ m ime ya n'oge ndụ m niile. ”
Otú a ka ọ malitere ọrụ 10 afọ ntorobịa na agụmakwụkwọ nke nọ na ndò nke Liberty Stadium na Landore. Ogologo azụ nke etiti site na ọkwa enweghị ntụpọ, na-akpọrọ ya na klasị nke ọhụụ pụrụ iche.
O nwere nsogbu na-enweghị atụ site na ọkwa dị ka onye nọ n'afọ iri na ụma.
Joe Rodon Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Egwuregwu bọọlụ bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na Swans na July 2015, mana ọ bụghị ozugbo nweta ọgbakọ izizi mbụ. Kama nke ahụ, Joe kwụrụ ụgwọ ọrụ ya site na mbinye ego na Njikọ nke abụọ n'akụkụ Cheltenham Town, ebe ọ nwetara ahụmịhe dị mkpa.
Mgbe ọ laghachiri na klọb nne na nna ya, Rodon gọziri ya na mbido izizi ya tupu oge nke 2018–19 Championship. Obi dị m ụtọ na ọ ghọrọ onye na-amalite mgbe niile na klọb ahụ ruo mgbe ọ gafere na Tottenham.
Hụ otu o si gwa Swansea okwu tupu ọ kwaga Tottenham.
Joe Rodon Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
Ngwurugwu 6 ụkwụ 4 nke anụ ọhịa ahụ amachaghị ruo mgbe ndị na-egwu si North London gosipụtara na ya dabara na atụmatụ Tottenham Hotspur. Ọ sonyeere klọb ahụ na Ọktọba wee mee ya Premier League nke mbụ na ụbọchị 26 nke Ọktoba 2020. Kemgbe ọ banyere na Lilywhites, Rodon gosipụtara na ya nwere ikike, ntinye na agụụ iji gosipụta onwe ya na Premier League.
Hụ onye rutere North London na 2020.
Ka a sịkwa ihe mere Jose Mourinho nwere okwukwe na Rodon ma kpọọ ya dịka Eric Dier onye, ​​na-ejuputa maka onye merụrụ ahụ Toby Alderweireld n'agbanyeghị Davinson Sanchez ịdị. Rodon kwụghachiri okwukwe Mourinho na ya site n'inyere Tottenham aka idobe akwụkwọ ọcha na ntinye 0-0 megide Chelsea ma jiri aka ya dozie nke ọma Tammy Abraham. Nwa nke 23 egosipụtala onwe ya ma nwee ike idobe ọnọdụ ya na azụ azụ. Kedu ụzọ ọ bụla ihe si kwụrụ maka ya, ndị ọzọ ka ha na-ekwu (gụnyere ihe ngosi vidiyo ya) ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Onye bụ enyi nwanyị Joe Rodon:
Nwa anyi nwoke kwere nghọta n'enweghi enyi nwanyi. Ee, onweghị onye mmekọ mmekọrịta anyị nwere ike iche maka nke Disemba 2020. Anyị agaghị ata ya ụta n'ihi na enweghị enyi nwanyị nwere ọtụtụ elele maka ndị na-eto eto.
Ọ ga-enyere ya aka inye aka Ebube aha Tottenham na egwu, mee ka ọnọdụ ya sie ike n'etiti etiti ndị ọzọ. Kpakpando bọl na-ekwe ka oge ya. O nwere igbe ndị dị ezigbo mkpa ọ ga-elele ugbu a.
Ihe obula kwuru ya nile, obu nwoke na nwanyi.
Ndụ ezinụlọ: Joe Rodon:
Maka ihe egwuregwu, Roblock na-eche n'ụlọ ma ọ nọ n'èzí ma ọ bụ pụọ. Ọ nwere ezinụlọ ya na-egwu egwuregwu na-ekele maka nke ahụ. N'ebe a, anyị ga-ewetara gị eziokwu gbasara nne na nna Joe Rodon. Ọzọkwa, anyị ga-eme ka eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere Nna Joe Rodon:
Keri bụ nna kpakpando bọọlụ. Ọ bụ otu oge Welsh International Bọọlụ Nkata. Nna na-akwado nkwado nwekwara mmasị na bọl ma nyere aka setịpụ ụzọ Sam na Rodon na egwuregwu ahụ.
Papa Joe Rodon Keri nwere obi ụtọ inwe ezinụlọ na-aga nke ọma.
Banyere nne mama Joe Rodon:
Tania bụ mama Roblock. Ọ bụbu onye nkuzi nke Llangyfelach Primary School bọọlụ. Ọ dị mma na ụmụaka ndị kpọrọ aha ya Dave Bassett (onye na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ Bekee). Ọchịchọ ya maka egwuregwu ahụ siri ike, ọ na-echekwa ọganihu Joe na ya.
Banyere ụmụnne Joe Rodon:
Nwa anyị nwoke nwere otu nwanne nwoke nke okenye nke aha ya bụ Sam. Dị ka Rodon, Sam gafere mmepe na Swansea mana emeghị ya ka ọ bụrụ ọkachamara. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ hụrụ etiti etiti n'anya ma nwee ekele maka ya maka iwetara aha ezinụlọ aha.
Banyere ndị ezinụlọ Joe Rodon:
Akụkọ banyere ezinụlọ nwere na nna nna Rodon bụ Peter bụ onye ọkachamara na-agba bọl. Ọ na-egwuri egwu maka Bradford n'etiti 1960s tupu ya abanye na Merthyr.
N'otu aka ahụ, nwanne nna nna Rodon bụ Chris nwere Brighton mgbe ndị Seagulls nọ na Old Division nke ochie na mbido 1980. O mechara kpọọ Cardiff City, Llanelli na Haverfordwest.
Agbanyeghị, enweghị ndekọ banyere nne na nna ochie, ndị nne na nna, ndị nne na nna, ụmụ nwanne nne na nwanne nwanne nwanne n'oge edere akwụkwọ akụkọ a.
Joe Rodon Ndụ Nke Onwe:
Ọrụ ya ọ bụ maka ịgbachitere ma na-egwu egwu, na-enyefe ya? Mba! O nwere ihe karịrị ya. Nke mbu, obu onye nwere oke nwayọ nke nwere agwa ruru ala.
Ọ bụ ezie na ọkpụkpọ na-acha nchara nchara bụ nwoke nwere okwu ole na ole, ntakịrị ihe ọ na-ekwu na-eme ka anyị mata ọdịnaya dị ịtụnanya nke agwa ya. O nwere mmasị n'ịgba basketball dị ka papa ya Keri mere. Joe nwere mmasị igwu mmiri dị ka otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya kachasị amasị ya, ọ gaghịkwa ala azụ iso ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
O nwere ndị enyi, ọtụtụ ndị enyi ọ hụrụ n'anya isoro ya nọrọ.
Ndụ Joe Rodon:
A na-enyocha ego bara uru nke ndị na-agba bọọlụ n'oge etinyela ibe a na akụkọ ndụ ya. Nke a bụ obere n'ihi na ọ dịbeghị anya ọ gbanwere site na bọlbụ nke abụọ na Premier League. N'ezie, mgbe Rodon bịarutere London, ọ bụ 'bara uru karịa' ego a kwụrụ ụgwọ ijide ọrụ ya. Kaosinadị, ndị nta akụkọ ahụ afụghị mkpọrọ n'ihi na ọ bụghị onye ama ama.
Onweghi kwa ugwo Rodon kwa izu nke £ 9,615 pound ma obu ugwo ugwo nke ,500,000 XNUMX pound kwesiri ekwesi na odi. Ruo mgbe ụgwọ ọnwa ya na-enwe nyocha dị elu, anyị ekwesịghị ịtụ anya ịhụ ya Ka ịnyagharịa n'okporo ámá ndị London na ụgbọ ala ndị mara mma. Ndị na-ahụ maka ụlọ kwesịrị ịzere igosi ya ụlọ na akụrụngwa ndị ọzọ ọ na-agaghị akwụlili ruo mgbe ọ ga - agwa nkwekọrịta ọhụrụ.
Eziokwu Banyere Joe Rodon:
Iji mechie mpempe a na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ eziokwu amachaghị banyere ya.
Kwa Afọ £ 500,000
kwa ọnwa £ 41,666
Kwa Izu £ 9,600
Kwa .bọchị £ 1,371
Kwa elekere £ 57
Kwa Nkeji £ 0.95
Sekọnd £ 0.01
You maara? Average nwa amaala Welsh ga-arụ ọrụ maka afọ 25 iji nweta ụgwọ ọnwa Joe kwa afọ na Spurs.
Kemgbe ị malitere ile Joe Rodon'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Banyere ihe banyere okwukwe, anyị nwere ike ịkọwapụta ebe iguzosi ike n'ihe Rodon dị. Ọ bụghị onye Alakụba, onye Buddha, onye Hindu ma ọ bụ onye mọnk Tibet. Ọ bụrụ na Rodon bụ onye kwere ekwe, mgbe ahụ ọ ga-abụ Onye Kraịst.
Eziokwu # 3 - FIFA 2020 stats:
EA Sports ọnụego Rodon 70 nwere ike nke 81 ihe. Agbanyeghị Fans kwenyere na ọ bara uru 78/82. Ọ bụ naanị isi atọ dị n'elu Nke Ethan Ampadu Nkọwa 67 zuru ezu na akara 10 n'okpuru onye otu ibe Spurs Ben Davies. Eziokwu bụ, ọ nọ n'okpuru.
Enwere mmalite dị umeala n'obi mgbe niile?
Eziokwu # 4 - zingtụnanya Elu:
Iguzo na 6 ụkwụ 4 sentimita asatọ, Rodon nwere arụmụka nwere oke kachasị mma maka ọrụ ya. Fans nke Lilywhites kwenyere na àgwà ahụ ga-eme ka isi ọwụwa nke Mourinho nke mmegide megidere ma anyị enweghị ike ikwenye obere.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na akụkọ banyere akụkọ nwata na Joe Rodon. Anyị nwere olile anya na ọ kpaliteere gị ikwere na chioma na-eme mgbe ịkwadoro ohere. Dị ka Rodon dị njikere tinye igbe niile nke Tottenham mgbe ha chọtara ya.
Ọ dị anyị mkpa ugbu a ịja ndị nne na nna azụ azụ maka ịzụlite egwuregwu nke mere Rodon kara aka maka elu. Na lifebogger, anyị na-anya isi na ị na-enyefe akụkọ nwata yana akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.
Aha zuru ezu: Joseph Peter Rodon.
aha otutu: "Roblock"
Age: Afọ 23, Ọnwa 1.
Ụbọchị ọmụmụ: 22 October 1997.
Ebe amụrụ onye: Obodo Llangyfelach na Swansea, Wales.
Elu na Cm: Udo 193 Cm.
Ndị nne na nna: Tania (nne), Keri (nna).
Ụmụnne: Sam (nwanne).
Ihe omume: Basketballgba basketball, igwu mmiri, iso ndị ezinụlọ na ndị enyi nọrọ ezigbo oge.
Bọchị agbanweela: Machị 17, 2021